SPY331 - Fakan-tsary Wi-Fi OMG Power Bank - Vahaolana OMG
Ny fakan-tsary miafina no be mpampiasa matetika any amin'ny habaka izay tsy tian'ny mpampiasa azy ho fantatry ny olona hoe izy no jerena. Ny fakantsary herinaratra Wi-Fi dia tsy fakan-tsary mivantana mivantana, fa koa banky herinaratra miasa ho an'ny fanamoriana fitaovana finday. Izy io dia miasa ao amin'ny trano ho an'ny fiarovana an-trano sy ny fakan-tsary amin'ny neny, na birao ho an'ny tompona orinasa hiaro ny tsiambaratelo, tsy misy fisintonana amin'ny trano miafina; Ny zavatra rehetra voafehy amin'ny fantsom-bazaha lavitra hanadino ny horonan-tsary mivantana andro aman'alina, ary ny fihetsiketsehana fanairana dia tena manelingelina.
Ny fakantsary fiarovana amin'ny banky herinaratra
1.0 Mega HD 1080P Famaritana avo
App misintona sary sy sary
5000mA anatiny, bateria 10 ora
6M tsy fahita lavitra alina
Video Fanapahan-kevitra: 1280 * 720, 15fps
Lahatsary miaraka amin'ny Audio: Support
Tarika SD Card: Max 128GB (Tsy tafiditra)
Fanamarinana Motion: Tohano amin'ny alàlan'ny fanosehana msgs sary & fanairana